Darpan Nepal – निरोगी भई सधै खुसी रहन चाहानुहुन्छ ?बदल्नुस यी सामान्य कुराहरु
निरोगी भई सधै खुसी रहन चाहानुहुन्छ ?बदल्नुस यी सामान्य कुराहरु
Oct 12, 2018Admin12Health0Like
भनिन्छ नी स्वस्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ती हो । त्यसैले पनि जीवनलाई सकरात्मक सोचका साथ अगाडी बढाउँनु पर्छ । हुन त मानविय स्वभाव नै हो धन , राम्रो जागिर , सम्पन्न घर , प्रतिष्ठा , राम्रो करियर र सुखसयलको जीवन होस भन्ने सोच्छौँ । तर के मानिसहरु पैसा र भौतिक सुखले मात्र हामी खुसी हुन सक्छौ ? पक्कै सक्दैनौ । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने आज बिकसित देशहरुमा सानबानको जीवन जिउँदा जिउँदै पनि मानिसहरु मानसिक तनावको सिकार बन्ने थिएनन् ।
किनभने उनीहरु मानसिक वा शारीरिक रुपमा कुनै न कुनै समस्या झेलिरहेका हुन्छन् । मानसिक तनाव, दवावले मानिसलाई जतिसुकै सुविधामा पनि खुसी रहन दिदैन । अहिले संसारका मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले मानसिक समस्यामा छन् ।
उनीहरुसँग पूख्र्यौली ज्यायजेथा भएर पनि, मनग्ये आम्दानी भएर पनि, मानप्रतिष्ठा भएर पनि सुख छैन । चैन छैन । आनन्द छैन । हर्ष छैन ।मानसिक रुपमा मात्र होइन, शारीरिक रुपमा पनि हामी अनेक रोगले घेरिएका छौं । कसैलाई मधुमेह छ, कसैलाई थाइराइड छ । कसैलाई बाथले सताएको छ, कसैलाई दमले गलाएको छ । कोही उच्च रक्तचापको औषधी खाइरहेका छन्, कोही पायल्सको उपचार खोजिरहेका छन् ।
हामी किन यति रोगी भइरहेका छौं ? हामी किन यति तनावग्रस्त भइरहेका छौं ?हाम्रो शरीर किन शिथिल भइरहेको छ ? हाम्रो मन किन बेचैन भइरहेका छ रुयसमा हाम्रो सोंच, चिन्तनसँगै जीवनशैली प्रमुख कारक बनेको छ । अहिले हामी जसरी हुन्छ धनदौलत जोड्ने चक्करमा छौं । पैसा कमाउने अनेक यत्नमै हाम्रो दिन वित्दो छ । बिहान उठेदेखि हामी पैसा सोच्छौं ।
राती ओछ्यानमा ढल्किएर सुत्नुअघि पनि पैसा नै सोच्छौं । यसरी पैसा वा धन कमाउने चक्करमा लिप्त भएर हामी आफैलाई बिर्सिरहेका छौं । कतिबेला खाने, के खाने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको हेक्का हुँदैन । बिहान मर्निङवाक गर्नुभन्दा हामीलाई घरजग्गा खरिद(बिक्रीको कुरा गर्नु बढी फलदायी लाग्छ ।
एकपटक सोचौं त यदि हामीसँग पर्याप्त पैसा भयो । धनदौलत भयो । जहाँ जान सकिने अवस्था भयो । जे खान सक्ने सामथ्र्य भयो । तर, शरीर रोगी भयो भने रु
कहाँ जाने के खाने ?न मनलाग्दो ढंगले घुमफिर गर्न सकिन्छ । न घुमफिर गर्दा त्यसको आनन्द नै लिन सकिन्छ । न मनलाग्दो खानेकुरा खान सकिन्छ ।
नखाएको कुराको स्वाद लिन नै पाइन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि, धन कमाउनु हुँदैन । पैसा आर्जन गर्नु हुँदैन । करियर बनाउनु हुँदैन । यद्यपी यी सबै कुरालाई प्राथकिताको आधारमा कुन कुराका लागि कति समय दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
Previous Postदशैंको माहोलमा पनि अभिनेता प्रदीप र जसिता फिल्मको छायाँकनमा नै व्यस्त Next Postनुवाकोट बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो,५५ जना घाइते